ခေတ်စားခဲ့တဲ့ UX တခု (infinite scroll) | by Poe Ei Phyu | UI/ UX Sharing | Medium
UI/ UX Sharing
ခေတ်စားခဲ့တဲ့ UX တခု (infinite scroll)
အခုတလော UX တွေအကြောင်း အတော်စဉ်းစားမိနေတယ်။ UX တွေစပေါ်ခါစကတုန်းက ကျ‌ေနာ်က UI Designer အဖြစ်ရပ်‌တည်နေတုန်း ။ UX (User Experience) စတာတွေကို Design blog တွေမှာ ခဏခဏမြင်လာရတော့ စပ်စုမိတယ် ။ သွားဖတ်ကြည့်တယ် ဒါပေမယ့် UI နဲ့ UX ကြားက ကွာခြားချက်ကို သေချာမသိသေးဘူး။ နောက်ပိုင်း designer တွေကလည်း UI နဲ့ UX ဘယ်လိုကွာခြားပုံတွေ ကို infographics တွေနဲ့ နားလည်အောင် သေခြာရှင်းပြထားတော့ နောက်ပိုင်း လေ့လာရင်းနဲ့ သိသွားတာပါပဲ။
( ဒီနေရာမှာ UI နဲ့ UX ကို အတိုချုံး ရှင်းပြရရင် UX design (User Experience Design )ဆိုတာ ကိုယ့် app or websiteတွေကို အသုံးပြုတဲ့ user တွေကို အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေပေးတာပါ။ UI ကတော့ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာသပ်သပ် design အပိုင်းပေါ့လေ။ ကျနော် နားလည်လောက်မယ်ထင်တဲ့ ဥပမာလေးတခုပေးပါမယ်။ ကျနော် ဖိနပ်တရံ၀ယ်လိုက်တယ် ။ ဖိနပ်လေးက designလေးနဲ့ Colorလေးက အရမ်းလှတယ် ဒါ့ကြောင့်၀ယ်ဖြစ်တာပေါ့ (ဒါက UI Designပါ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲ) ဒါပေမယ် ့ကြာကြာ စီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ဖိနပ်ကစီးလို့မကောင်းတာ ၊ ခြေထောက်နာတာ၊ ခြေထောက်ပူတာတွေ နဲ့ ဖိနပ်ပေါက်တာတွေ ဖြစ်တယ် စီးတိုင်းလည်း လှသာလှတာ သက်တောင့်သက်သာမရှိဘူး။ (ဒါက UX ပါ ၊ အသုံးပြုရတာ ကောင်းမကောင်း ။ စီးလို့မကောင်းတဲ့ဖိနပ်ကတော့ bad UX ပေါ့လေ။)
ဒါဆို့အာ့ဖိနပ်ကို ဆက်စီးနေအုံးမှာလားပေါ့။ ကျနော် တော့မစီးတော့ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် UI ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း UX မကောင်းရင် အဆင်မပြေပါဘူး။
(ဒါလောက်ဆိုရင်နည်း၂ နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ၊ မရှင်းသေးရင် comment မှာရေးခဲ့ပါ၊ ရှင်းအောင်ထပ်ရေးပေးတာပေါ့လေ)
အာ့တုန်းက infinite Scrollတွေလည်းစပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့။ ( infinite scrollဆိုတာ pagination ပုံစံမျိုး page 1,2,3 မပါဘဲ ၊ နိပ်စရာမလိုပဲ web page ကို scrollဆွဲလေ contentတွေကျလာလေ.. နောက်ဆုံး content တွေ ရှိသမျှကုန်သွား‌ေတာ့မှ scroll ဆွဲလည်း ထပ်ဆွဲလို့မ‌ရတော့တဲ့ အရာကိုပြောတာပါ။ )
contentများများနဲ့ user တွေကို ကိုယ့် websiteတွေပေါ်မှာ clickတချက်နှိပ်စရာမလိုဘဲ contentများများမြင်ရ အောင်ပြ‌ေပးပြီး websiteပေါ်မှာ ကြာကြာနေဖို့ ဆွဲဆောင်ထားတာပေါ့။ (user အများစုက clickတချက်နိပ်ရမှာထက် scrollဆွဲရတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်)
အာ့တုန်းက stock photo ရောင်းတဲ့ website တွေ နဲ့ e-commerce websiteတွေမှာ တော်တော်သုံးကြတယ် ။ shoppersတွေကို infinite scrollဆွဲစေပြီးကြာကြာနေစေ‌ပေမယ့် (တကယ်လည်းကြာကြာနေတယ်) ဒါပေမယ့် e-commerce website တွေရဲ့ footer မှာ information နဲ့ navigation တွေကို ကြည့်ဖို့က လုံး၀အဆင်မပြေတော့ဘူး။ scrollဆွဲလေ contentကထပ်ကျလေ footer မှာရှိတဲ့ informationကို ဖမ်းလို့မရလေဘဲ.. ဆိုတော့ လိုက်လေပြေး‌ေလ လုပ်နေသလိုပါပဲ။ ပြောရရင် e-commerce websiteတွေက informationနဲ့ navigationတွေကို အောက်မှာများများထားလေ့ရှိတော့ footerက menuကိုသွားချင်ရင် infinite scrollကြောင့်သွားလို့မရတော့ဘူးြဖစ်လာတော့.. e-commerce websiteတော်တော်များများက infinite Scrollကို လ အနည်းငယ်ပဲသုံးပြီး load more CTA ထည့်တာ တို့ ( infinite scrollနဲ့ ဆင်တူတယ် (တpage ထဲမှာပဲ content‌ေတွထပ်ပြ‌ေပးတယ်) ဒါပေမယ် သူက CTA ကိုနှိပ်မှ နောက်ထပ် contentကျလာတာ။ infinite scrollကတော့ ဘာမှနိပ်စရာမလိုဘဲ scrollဆွဲ‌လေ contentကျလေပဲလေ။ )
တချို့ကလည်း pagination styleကိုပြန်သွားကြတာ များတယ်။ (ြပည်တွင်းက e-commerce websiteတခုလည်း infinite scrollကို လအနည်းငယ်ကြာ အသုံးပြုခဲ့သေးတယ် ၊ တချို့သိကြမယ်ထင်ပါတယ)
အာ့တော့ infinite Scrollကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့် websiteက footerမှာ informationများများထားမယ့် websiteလား ၊ ဒါမှမဟုတ် footerမှာ ဘာလင့်မှမထာဘဲ website copyrightပဲရှိနေမယ့်websiteလားဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားပြီးမှ သုံးသင့်ပါတယ် ။
Infinite scrollကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးသင့်လဲဆိုတော့ “Content တွေများများပြချင်တဲ့အခါ” မျိုးမှာသုံးသင့်ပါတယ် (eg. E-commerce နဲ့ social media website တွေ) ။ page loading timeကိုတော့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။
အခုတော့ Infinite scrollတွေက လုံး၀ပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ အသုံပြုနေတဲ့ အသုံး၀င်နေတဲ့နေရာတွေရှိနေသေးတယ်။
Infinite Scrollသုံထားတဲ့ websiteတွေကို အောက်ကလင့်မှာ ‌ေလ့လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ သုံးတတ်တယ် လို့ပြောလို့ရတယ် ။ သုံးတတ်တဲ့သူအတွက်ကတော့ အရမ်းအသုံး၀င်ပါတယ်။
UI/ UX Design, News, Tips & Tricks Knowledge Sharing
A Passionate UI/ UX Designer
UI Designers/UX Designers အတွက် Sketching အရေးပါမှု နှင့် Sketching မလုပ်ပဲ UIကို…
Kool San in UI/ UX Sharing
UI Designers တွေအတွက် Free Online UX Course များ
User Goal နဲ့ User Task ဆိုတာဘာလဲ နှင့် User Experience ကောင်းဖို့ User Goal နဲ့ User Task ကို…
UI/UX Designerတစ်ယောက်အနေနဲ့ “ဘာ”ကိုဆက်လေ့လာရမလဲ မသိတော့ရင်…
Poe Ei Phyu in UI/ UX Sharing
UX Designer တွေအတွက် Empathy ရဲ့ အရေးပါမှု နှင့် Empathy Map အကြောင်း
အကောင်းဆုံးနဲ့ အသုံး၀င်တဲ့ Sketch Plugins များ (2020)
Click or tap count ကို ကျနော်တို့ ရေတွက်သင့်လား? User Journey Improvement နဲ့ Click count အကြောင်း